Achọpụtara ihe kpatara ihe ọhụrụ El Niño | Netwọk Mgbasa Ozi
Achọpụtara ihe kpatara nsogbu El Niño
A nyochaa ihe El Niño ruo ọtụtụ iri afọ na-agbaso usoro ndekọ ọnụ ọgụgụ nke gosipụtara mmetụta nke mgbanwe mgbanwe ihu igwe na usoro usoro nke ihe a. Dabere na a ọhụrụ ọmụmụ na-amalite a anụ ahụ nlereanya dabere na ọkwa nke seismicity na amụma buru amụma nkenke ziri ezi na-ekwu na ekwesiri inyocha ihe El Niño.
A na-akpọ aha ọmụmụ ihe a "Njikọ na-efu na ọgbọ nke ihe omume El Niño" ma ọ bụ ndị ọkà mmụta sayensị Spanish bụ Fernando Mato na Greek Theofilos Toulkeridis kwadebere, ma bipụtara ya na mbipụta ya kachasị ọhụrụ site na akwụkwọ akụkọ pụrụ iche "Science nke Tsunami Ihe ize ndụ ". Want chọrọ ịma ihe ọmụmụ a bụ?
1 Ihe omimi nke El Niño
2 Mmekọrịta dị n'etiti ọrụ seismic
Ihe omimi nke El Niño
Dabere na ndị dere nyocha a, ọ ga-ekwe omume ịchọta otu n'ime isi ihe kpatara oke ikuku a na-eme. Ruo ugbu a ka a maara ọrụ ya ozugbo ọ malitere ime, ma amụma ya abụwo ezigbo oge siri ike.
Fernando Mato, PhD na Telekomunikashions si Mahadum Vigo (Spain) kọwara "nchọpụta a maka oge izizi ihe ọhụụ El Niño, na - anọchi anya ngbanwe nke ihe ọ bụla dị na mbụ ma na ihu igwe nke ụwa". na onye nyocha nke Prometheus na Mahadum ESPE Armed Forces na Quito.
Mmekọrịta dị n'etiti ọrụ seismic
Ebe ọ bụ na ụdị ihe a malitere ịmụ, ọmụmụ a lekwasịrị anya metụtara ihe ndị a metụtara ọnọdụ okpomọkụ nke oke osimiri, ikuku ma ọ bụ nrụgide. Otú ọ dị, isi ihe dị na nchọta bụ ichegharịrị ihe nlereanya a.
A mụọla mmekọrịta mmekọrịta ala na nchọta doro anya n'etiti nnukwu mmụba nke ọrụ seismic na mpaghara ndị achọtara na Pacific plate (nke sitere na mmegharị agwa na oke ya) na usoro nke El Niño.
Onye nyocha ahụ kwuru, "Pacific belt na-enyocha ihe dịka pesenti 90 nke arụ ọrụ seismic na ọkwa ụwa niile ma enwere ọmụmụ ihe n'oge gara aga chọpụtara ụfọdụ mmekọrịta, mana ha egosighi kpọmkwem ihe mmekọrịta ahụ bụ
"Anyị mụrụ ihe banyere ime ime Osimiri Pasifik ma chọpụta mmekọrịta dị n'etiti ihe El El Niño mgbe ọ pụtara ma ọ bụ nke siri ike, ya na ịrị elu seismicity na mpaghara ụfọdụ ", ọ kọwara.
Ka ọrụ seismic na-abawanye na Pacific, a na-emepụta ọtụtụ mmanụ magma ndị na-akwụsị n’elu oke osimiri ahụ. Ndị a feathers nwere okpomọkụ n'etiti ogo 400 na 1200 wee gbatịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 800.
Site n'ọmụmụ ihe a, emerela ya nkwa na agaghị enwe ihe ọhụụ El Niño n'oge na-adịbeghị anya ebe ọnọdụ ziri ezi adịghị n'ọnọdụ ọ ga-eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Achọpụtara ihe kpatara nsogbu El Niño
Ihi ụra supervolcano Campi Flegrei nwere ike ịdị ize ndụ karịa ka a tụrụ anya ya
Plutocene, ma ọ bụ otu ụmụ mmadụ nwere ike isi mee ka ụwa bụrụ ebe adịghị mma